ဆေးရုံထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများအတွက် China QF-JX-300 China ICU ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသီးခြားတံတားဆွဲကြိုး Wanyu
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတံတားထိုးတံဆိပ်ကိုပုံစံနှစ်မျိုးဖြင့်ပုံစံပြု။ ခြောက်သွေ့သောအပိုင်းနှင့်စိုစွတ်သောအပိုင်းကိုပေါင်းစည်း။ ခွဲထားနိုင်သည်။
စိုစွတ်သောအပိုင်းကိုအလွှာစုံတူရိယာပလက်ဖောင်းဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည်။ ၎င်းသည်ဆေးထိုးပြွတ်စက်နှင့်ပြုတ်ရည်စုပ်စက်နှင့်တပ်ဆင်ထားသည်။ အပူပိုင်းအပိုင်းကိုအလွှာစုံကိရိယာပလက်ဖောင်းတပ်ဆင်ထားပြီးအံဆွဲအမြင့်ကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဓာတ်ငွေ့၊ စုပ်ယူခြင်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထောက်ပံ့ရေးနှင့်ကွန်ယက်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာဆိပ်ကမ်းများကိုခြောက်သွေ့။ စိုစွတ်သောနေရာများတွင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ၀ န်ထမ်းများလက်လှမ်းမီနိုင်သောနေရာတွင်စီစဉ်ထားသည်။
3. ပျော့ပျောင်းသော LED Lightning
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအတွက်ကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်စေရန်အတွက် LED bridge သည်ဆေးတံတံတား၏ထုပ်များပေါ်တွင်စီစဉ်ထားသည်။
ဆေးရုံ - Pendant
စျေးပေါ - ခွဲစိတ် - ဆွဲပြား
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ - ဆွဲပြားစနစ်
4. Modular ဖွဲ့စည်းပုံ
5. ဓာတ်ငွေ့ - လျှပ်စစ်ခွဲခြာဒီဇိုင်း
ဆက်သွယ်မှုမှားယွင်းခြင်းကိုကာကွယ်ရန်အတွက်ဓာတ်ငွေ့မျက်နှာပြင်၏အရောင်နှင့်ပုံသဏ္Differentာန် အလယ်အလတ်တံဆိပ်ခတ်ခြင်း၊ ပြည်နယ်သုံးခု (ဖွင့်၊ ပိတ်၊ ပိတ်ခြင်း) အကြိမ် ၂၀၀၀၀ ကျော်အသုံးပြုရန်။ ၎င်းကိုလေချွတ်ခြင်းမရှိဘဲထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။
ရွေ့လျားနိုင်သောlengthရိယာ၏အကျယ် - ၅၅၀ မီလီမီတာ
ခြောက်သွေ့သောofရိယာ၏လည်ပတ်ထောင့် ၃၅၀ ဒီဂရီ
စိုစွတ်သောofရိယာ၏လည်ပတ်ထောင့်: 350 °
တံတား၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှု - ၆၀၀ ကီလိုဂရမ်
စိုစွတ်သောရိယာ၏သယ်ဆောင်နိုင်စွမ်း - ၂၈၀ ကီလိုဂရမ်
Equipotential Socket များ
ရှေ့သို့ LEDD700 မျက်နှာကျက်အမျိုးအစား LED လက်မောင်းစစ်ဆင်ရေးအလင်း Video Camera
နောက်တစ်ခု: စက်ရုံမှ TS-DQ-100 နှစ်ချောင်းတပ်ဆင်ထားသောလျှပ်စစ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ endoscopic ဆွဲကြိုး
TD-TS-100 စက်ရုံတိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ရေးဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Combi ...
HD အတွက် ZD-100 ICU ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကော်လံဆွဲ ...